Tiri uchinyora 5 masango Most dzakanaka Europe ingori panguva yemafaro emwaka! Iyo quintessential yezororo yekuzorora kune vazhinji vanofarira mafambiro ndeye pamhenderekedzo. Asi Europe ine nzira inopfuura pamhenderekedzo yekutsvaga. Ngatienderanei sezvatinonyatsoongorora stomp kunhivi mamwe masango yakaisvonaka kwazvo Europe.
Kanganwa pamusoro yakatsvikinyidzana mahombekombe nenzwi guru nevana vavo uye pestering hawkers. Dzimwe nguva iwe haugoni kurova rugare norunyararo dzokudondo akanaka. Kuva zvakasikwa zvechokwadi kuchirapa, saka ngatitorei mabhegi emashizha kutenderedza mamwe emafuta akanaka kwazvo muEurope.
The Bavarian Forest National Park ndiyo paka yekutanga uye hombe yenyika yeGerman, uye mumwe masango yakaisvonaka kwazvo Europe. Sei ungabvunza? Tinofunga chikumbiro yacho nyore murenje asi zhinji. Nemhaka murume ndokusiya zvakanaka oga! The paka rinovimbisa mukare nzvimbo, rakaisvonaka twi (yakakurumbira acho Grosser Falkenstein, Lusen, uye Grosser Rachel), nyanya Hiking uye cu mudungwe munzira, girazi madhamu, mikana yemitambo, chinonakidza treetop kufamba, uye zvakawanda.
Achida kutora mhuri iri inonakidza uye rakasiyana uchinzvera vachigere mupaki? Kufamba pamusoro petsoka (Baumwipfelbad) pana Bavarian Forest National Park anopikira pedyo kusangana zvakasikwa uye uchinzvera mhuri yose. Iyo 1,300-mita yakareba yehuni isina-nzira yekufamba inotungamira vashanyi kuzasi kweiyo dome yakaumbwa yekuongorora shongwe, kupa naka maonero yedondo panzira. Unogonawo kusarudza kuita neanofadza munzira. zvisinei, yakanakisisa achaponeswa yokupedzisira. Kubva pamamita makumi mana nemana ekucherechedza, unokwanisa kuita mabiko meso enyu risina kumiswa pfungwa sango uye kunyange chando-akapfeka Alps.
Welcome kune mhuka renje! Trillemarka Rollagsfjell Nature Irambe mumwe wokupedzisira mhandara dondo nzvimbo munyika. Ichi vanoenda-enyu nzvimbo musango pakati yekare dondo kukura, Skiing pamusoro isina kumbobatwa makomo, uye hove mu wakajeka zvechokwadi Rivers uye madhamu. Panewo zvakawanda, 93 mu muunganidzwa, of Red Chinotanga mhuka. Ita chokwadi iwe hike kuti chifananidzo akadana Madonna uye mwana, chiri 100 metres kunze Park, nokuti incredible maonero mumupata uye mhiri. Uyai mijenya pamusoro akaturikidzana, sezvo okunze zvikuru Kuchinja munharaunda yacho yose.
Nzvimbo yacho yave a National nhaka nzvimbo pamusoro isingaenzaniswi nedzimwe ukoshi apo, zvakakodzera, muzvarirwo mitemo. Chatinoda nezve iyi paki ndiyo nzvimbo isina kubatika uye isingasvikike pamiganhu yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAlps, iyo munguva prehistoric nguva akaona paumbwe mazitombo echando (wokupedzisira Kunyangarika pamusoro 10000 makore apfuura!).
Kusiyana kuripo pakati trẻ Cime Di Lavaredo uye Belluno Dolomites, sevatsigiri akacheneruka makomo nokuda kuti Ruvara rockface. Kunosimbisa Masvingo uye vertiginous rockfaces: ndiwo mupfungwa pamusoro yendarama zvapungu, zvisikwa zvinenge kunozivikanwa nokuda kwenyasha dzavo, ivo vane mbiri uye vane mbiri vachikwira kuburikidza nematenga uye kushomeka kwemarudzi avo.
Zvinooneka Parc National of Ecrins ndeimwe gumi National Parks French uye chechipiri pakukura pashure Vanoise. The 1000 sq km, yaidzivirira nzvimbo straddles ari Hautes Alpes uye Isere madhipatimendi, Munotatamura pakati Bourg d'Oisans, Briancon, uye Embrun. The paka anoramba kunyanya unspoiled nekuvongwa ayo kure nzvimbo uye chokwadi, iri pane yedu runyorwa rwemasango akanaka kwazvo muEurope.
Nzvimbo yemakomo ine mapaki akasangana inotsanangurwa nekudonha kwemazaya echando nenzizi dzinoyerera nekukurumidza, izvo makasika poromoka yakamanikana mumipata. In chirimo, vaibvakacha, dombo makomo, makomo emabhasikoro, uye vamhanyi verwizi vanodirana kupaki kuti vanakidzwe nemamiriro ekunze akanaka uye kushaya-shaya. In yechando, Snowshoeing, hut kuti hut the Pandakatenderera uye kukwira makomo dzakakurumbira. The the dzisina pakati Alpe d'Huez agere chete kudarika miganhu mupaka. Zvinova 10 ? km vakasimudza switchbacks kubva Bourg d'Oisans.
Lyon Airport kuParis Zvitima
The Kusingaperi Kukwezva Nature inguva yekumisikidza hunyanzvi iri kushandura iyo Worthersee nhandare yebhola. It riri mu Klagenfurt, uye ikozvino sango uye unyanzvi chokugadza!
Around 300 miti, vamwe yairema matani matanhatu nerimwe vachange nokungwarira wakasimwa pamusoro aivapo bhora nenamo. ichi, ipa pfungwa yesango repakati peEurope. kamwe wakasimwa, sango achatora pamusoro upenyu wayo, chinja mavara sezvo mwaka unoshanduka uye unokwezva mhuka dzesango.
Unoda embed yedu Blog romukova “pamusoro 5 Most Masango Beautiful In Europe” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-forests-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)